Halatra omby Nanararaotra ny fandresen’ny Barea ireo dahalo
Nohararaotin’ireo jiolahy ny harerahan’ny mpiompy avy niari-tory noho ny hafaliana noho ny fandresen’ny ekipam-pirenena Barea.
Avy nifaly nanaraka baolina tamin’ny haino aman-jery mantsy ny teo an-tanàna ka natory fehizay. Nitrangana halatra omby tao Analamahitsy, fokontany Bedasy, kaominina Ambatomanjaka, Distrikan’i Miarinarivo, faritra Itasy. Ny alahady teo tamin’ny misasak’alina no tonga nanafika ireo dahalo. Tsy fantatra ny isan’ireto farany izay nangalatra omby efatra an-tsokosoko tao am-bala. Ny afak’omaly marain’ny 8 jona vao tsikaritry ny tompony fa tsy tao intsony ny biby fiompiny araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena eo Ankadilalana. Maro amin’ireo teo an-tanàna no nihevitra fa nampiasa fonoka ireo jiolahy. Nidina tany an-toerana ny zandary avy eo Ambatomanjaka. Nanaradia avy hatrany ireo fokonolona niaraka tamin’ireo mpitandro filaminana saingy tsy hita hatramin’izao ireo omby. Ny miaramilan’ny zandarimariam-pirenena avy eo Ambatomanjaka no mandray an-tanana ny tohin’ny raharaha.